Ụlọ ọhụrụ Airbus Single-Aisle Airspace na-agbakwụnye nkasi obi na ụgbọ elu Lufthansa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụlọ ọhụrụ Airbus Single-Aisle Airspace na-agbakwụnye nkasi obi na ụgbọ elu Lufthansa
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Lufthansa emeela ọzọ nhọrọ nke ihe ọhụrụ na arịrịọ ndị njem, na-ebuli ogwe maka ọha na-efe efe n'ozuzu iji nweta ọkwa nke ọzọ, Airbus na-eduga ihe nrụpụta ụlọ.
Lufthansa na-eji ụgbọ elu Single-Aisle Airspace arụ ọrụ ụgbọ elu mbụ ya.
A ga -eji ihe karịrị ụgbọ elu 80 nke ụgbọ elu Lufthansa A320 kwadebe ụlọ ọhụrụ.
Lufthansa na -aga n'ihu na -elekwasị anya na ngwaahịa adịchaghị mma maka ndị ọbịa ya.
Lufthansa amalitela ọrụ na ụgbọ elu ezinụlọ mbụ ya nke A320-A321neo-nke gosipụtara ụlọ ọhụrụ Airbus 'Single-Aisle Airspace'. N'ime ime nke a, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ ghọrọ onye ọrụ izizi na Europe iwebata atụmatụ ụlọ ọhụrụ Airspace maka ndị njem nọ n'ụgbọ elu A320 Family. Na 2018 Lufthansa Group, onye ahịa ezinụlọ A320 ogologo oge, họọrọ ịkwadebe karịa 80 nke ụgbọ elu A320 ọhụrụ ezinụlọ ya site na Airbus na ụlọ Airspace.
Njirimara Airspace ọhụrụ ahụ gụnyere: ogwe ndị dị gịrịgịrị karịa maka oghere onwe onye na ọkwa ubu; nlele ka mma site na windo nwere bezels ha emezigharịrị na ndo windo agbakwunyere kpamkpam; bins kachasị elu maka akpa 60% karịa; teknụzụ teknụzụ ọkụ LED zuru oke; LED 'ọkụ' mpaghara nbata '; na ụlọ mposi ọhụrụ nke nwere njirimara na -enweghị mmetụ na ebe antimicrobial.
"Lufthansa emeela ọzọ nhọrọ nke ihe ọhụrụ na arịrịọ ndị njem, na-ebuli ogwe maka ọha na-efe efe n'ozuzu iji nweta ọkwa nke ọzọ, Airbus na -ebute ihe nrụpụta ụlọ ", Christian Scherer kwuru, onye isi azụmahịa na Airbus na onye isi mba ofesi. "Enwere m obi ụtọ ịnabata otu n'ime ndị mmekọ anyị ogologo oge, Lufthansa, ka ọ bụrụ onye ọrụ Europe mbụ maka ụlọ A320neo Family Airspace. Apụghị m ichere iji efe n'otu n'ime ụgbọ elu ndị a. ”
Heike Birlenbach, Onye Isi Ahụmịhe Ndị Ahịa, Otu Lufthansa na -ekwusi ike, "N'agbanyeghị nsogbu ahụ, anyị na -aga n'ihu na -elekwasị anya na ngwaahịa dị elu maka ndị ọbịa anyị." “Maka anyị, adịchaghị pụtara inye onyinye dị elu, nkeonwe yana mkpa maka ndị njem anyị niile oge niile. Site na Airspace Cabin ọhụrụ, anyị na-emeziwanye ahụmịhe njem na okporo ụzọ dị mkpụmkpụ yana ịtọ ntọala ụlọ ọrụ ọhụrụ. ”
Lufthansa nọ na-arụ ọrụ ezinụlọ A320 kemgbe afọ 1980 ma bụrụkwa onye ọrụ mbụ nke A321 na A320neo. Otu ụgbọ elu bụ otu n'ime ndị na -arụ ọrụ Airbus kachasị n'ụwa niile.
Na ngwụsị July 2021, ezinụlọ A320neo anatala ihe karịrị iwu 7,400 n'aka ndị ahịa 120 n'ụwa niile.